Fomba hisafidianana polycarbonate ho an'ny trano fonenana misy anao
Ny polycarbonate dia manana toetra miavaka, ny hafanana sy ny fiarovana ny vatan'ny olombelona dia mamela azy io hampiasaina amin'ny famokarana menaka. Ankoatra izany, ny fitaovana dia ampiasaina amin'ny elektronika, fiara, fanorenana. Ny polycarbonate dia mamokatra masoandro, gazebos, trano fonenana, ary ny hafa.
Ny dingan'ny famokarana serizy amin'ny polycarbonate dia manao izany
Ny tombony amin'ny legioma mivelatra, indrindra fa ny lohataona ary na amin'ny ririnina aza, dia tsy voaporofo. Noho izany, maro no tonga amin'ny fieritreretana ny trano fonenana. Rehefa nanapa-kevitra ny hitrandraka izany, ny ankamaroany dia manapa-kevitra hanangana harona polycarbonate amin'ny tanany, satria ny polycarbonate dia matanjaka kokoa noho ny fitaovana hafa.